အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဗာရုတ်ဟာသူ့အတွက် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ဗာရုတ်ဟာသူ့အတွက်: လုပ်ငန်းခွင် သာ. ကောင်း၏။ To-Do & နေ့အစီအစဉျ timer,
ဗာရုတ်ဟာသူ့အတွက်: လုပ်ငန်းခွင် သာ. ကောင်း၏။ timer, To-Do & နေ့အစီအစဉျ APK ကို
အာရုံစူးစိုက်နေပါ, အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲ, Tasks ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လေ့လာနေသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်းကျွန်တော်တို့အများစုဟာတွေအများကြီးအာရုံပြောင်းသွားစေပါတယ်။ အာရုံပြံ့လှငျ့ 30 မိနစ်ပြီးဆုံးနိုင်အလုပ်တခုကို 60 မိနစ်ကြာကျနော်တို့အပတ်ကတစ်ခုလုံးနေ့ရက်ကာလ၌ဖြုန်းသို့မဟုတ်တစ်နှစ်အတွက်ဘယ်လောက်အချိန်စိတ်ကူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကိုလျှော့ချ!
ဗာရုတ်ဟာသူ့အတွက်အထူးအာရုံပြံ့လှငျ့ / အခြိနျဆှဲကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးတက်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ချမှတ် & လက်မှာအလုပ်အပေါ်အာရုံစိုက်နေဖို့ကူညီပေးသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အလုပ်အချိန်ကနေနေ့က-အိပ်မက်မက်ခြင်း & အာရုံပြံ့လှငျ့ဖယ်ရှား, ဒါပေမယ့်လည်းဖွဲ့စည်းသင့်ရဲ့အလုပ်စောင့်ရှောက်ရန်ကူညီပေးသည်မဟုတ်ပဲ။
တစ်ဦးကသင့်လျော်သောအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု Tool ကို
တစ်အာရုံစိုက် Timer, လုပ်ငန်းခွင်တံဆိပ်များနှင့်တစ်ဦးရန်-do list ကိုအတူ, ဗာရုတ်ဟာသူ့အတွက်ပြီးပြည့်စုံအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု App ဖြစ်ပါတယ်နှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးအသစ်ကအဆင့်သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
သတိပေးချက်များနှင့်အတူတစ်ဦးကရန်-do List ကို
တစ်ဦးကအပြည့်အကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှု tool ကို
ပြန်လည်စစ်ဆေးကြည့်ရှု / ပြန်လည်စုစည်းမှု timer နေရာမှာတူသောအင်္ဂါရပ်များအထူးကျောင်းသားများကို & Self-လေ့လာမှုအဘို့တည်နေကြတယ်။ Labels: တစ်ဘာသာရပ်နှင့်အတူအသီးအသီး session တစ်ခု tag ဖို့နဲ့, အရှင်ကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်အပေါ်သုံးစွဲသူတို့ရဲ့အချိန်ကိုခြေရာခံနိုင်ပါတယ်သုံးနိုင်တယ်။
exploit ရန်, အများကြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်
•သင်အတွတ် timer ကိုစတင်ရန်ပြီးတာနဲ့မျက်နှာပြင်၏အလယ်ဗဟိုတွင်စက်ဝိုင်းတစ်ခုကိုပေါ်တွင်သင်အာရုံပြံ့လှငျ့ / မဆုံးရှုံးအာရုံစိုက်ရတိုင်းအချိန်ကိုအသာပုတ်ရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မယ်။
•ပေါ်မှာကိုအသာပုတ်ကိုချက်ချင်းလေ့လာနေ / အလုပ်လုပ်ပြန်လည်စတင်။ ဤသည် hack ကအပြည့်အဝအာရုံစိုက်နှင့်အတူအာရုံနှင့်အလုပ်အပေါ်မဆိုအချိန်မဖြုန်းတီးရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်။
(သင်တို့သည်လည်းအလုပ် session တစ်ခုစတင်လိုက်တာနဲ့အလိုအလြောကျ Wi-Fi ကို turn off ဖို့ option ကို enable နိုင်ပါတယ်။ )
• session ရဲ့အဆုံးမှာသင်အာရုံပြံ့လှငျ့တယ်ဘယ်လိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာသိကြပါလိမ့်မယ်။
•အလုပ်အတွက်စိတ်အားထက်သန်နေဖို့စေရန်, သငျသညျအသီးအသီး session တစ်ခုနှင့်အတူတစ်ဦးရည်မှန်းချက် tag နိုင်ပါတယ်။
•တစ်ဦးချင်းစီချိုး, သင်လတ်ဆတ် & တန်ဖိုးရှိရှိနေအချို့သောအခြေခံအကြံပြုချက်များအတိုင်းလိုက်နာနိုင်ပါတယ်။
•သင့်အာရုံပြံ့လှငျ့အပေါ်အခြေခံပြီး, ဒါဟာအချိန်နှင့်သင်၏တိုးတက်မှုတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးပြီးအာရုံစိုက်အလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံး timer နေရာမှာကြာချိန် & တစ်နေ့တာအကောင်းဆုံးအချိန်များကိုပြောပြတယ်။
အချိန် & အလုပ်၏ခြေရာခံပါ
•တံဆိပ်များများစာရင်းကို Create - တာဝန်များကို, ဘာသာရပ်များသို့မဟုတ်အလုပ်အမျိုးအစားများ။
•အတွတ် timer setting သောအခါ, အတူတံဆိပ် attach ။
• Labels: သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောတာဝန်များကိုအပေါ်ဖြုန်း & သင်သည်သင်၏အလုပ်အချိန်အသေးစိတ်စာရင်းဇယားအရမည်မျှအချိန်ကိုခြေရာခံပါလိမ့်မယ်။
ဗာရုတ်ဟာသူ့အတွက်ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိသော်လည်းသူမည်သူမဆိုနှင့်မည်သည့်ကျောင်းသားများအတွက်အသုံးဝင်သော Self-လေ့လာမှု app ကိုတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုက App ဖြစ်ပါတယ်။
- အချိန်ဇယားကို Create သင့်တစ်နေ့တာစီစဉ်ခြင်းနှင့်ချောမွေ့စွာအကြောင်းကြားရ။
- ထပ်ကျော့အချိန်ဇယား ဖန်တီး. နေ့စဉ်အားလုံးသင့်အလုပ်များကိုအဘို့အချိန်ပေါ်နေဖို့။
- သင့် timer နေရာမှာ preset နှင့်တစ်ခုတည်းကိုထိပုတ်ပါနှင့်သင်၏အစည်းအဝေးများစတင်ပါ။
- သီးခြားအပိုင်းများတွင်နေ့အဘို့ To-dos / သင့်အလုပ်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်။
ဗာရုတ်ဟာသူ့အတွက်: လုပ်ငန်းခွင် သာ. ကောင်း၏။ To-Do & နေ့အစီအစဉျ timer,
ဗာရုတ်ဟာသူ့အတွက် Apps ကပ
အာရုံစူးစိုက် Timer ပြန်လည်မွေးဖွား